Nb Safal: February 2016
चोकमा एउटी युवती सधैँ कसैलाई कुरीहरेकी हुन्थी । पर्खाइकै बिच ऊ आफ्नो रातो स्कुटरको ऐनामा अनुहारको चेकजाँच पनि गराउँथी । एकछिनमा अर्की युवती आएर त्यो स्कुटरमा बसेपछि स्कुटर हुँईकिन्थ्यो ।
अफिस जानको लागि चोकमा गाडी कुरेर बस्ने अभयले त्यो दृष्य प्रत्येक बिहानीजसो देखीरहन्थ्यो । कतिपटक त स्कुटरवालीसँग अभयको नजर पनि जुध्थ्यो । तर बोलचाल भएको थिएन । कहिलेकाहीँ मुस्कानको दोहोरी भने चल्थ्यो । त्यो क्रम महिनौँसम्म चलिरह्यो ।
केही महिनापछि अभयले त्यो दृष्य देख्न छोड्यो । उसले वरिपरि नजर नडुलाएको पनि होइन, तर हप्ता दिनसम्म पनि उसले उनीहरुलाई कतै देखेन । अभयले ठान्यो स्कुटरवाली कतै बाहिर गएकी होली वा बिदामा होली !
अभय सधैँझैँ चोकमा गाडी कुरेर बसिरहेको थियो । अचानक कसैले स्कुटरको हर्न बजायो । उसले स्कुटरवालीलाई देख्यो । स्कुटरवाली मुस्काई । अभयले वरपर हेर्यो तर कसैलाई देखेन ।
“तपाईँलाई नै बोला’को हो ।”, स्कुटरवाली बोली । “कहाँ पुग्ने हो आउनुस् बस्नुस्, म पुलचोकसम्म हो ।”
अभय दंग पर्दै बोल्यो –“ए हुन्छ नि ! म कुपण्डोल हो ।”
“अनि तपाईँसँगै जाने अर्की साथी खै त आज ?”
“ए कविता ?, ऊ मसँग जाँदिन अब, उसको बिहे भयो । अर्कै ठाउँमा बस्छे ।”
स्कुटर हुँईकियो ।
“ए कविता हो उहाँको नाम, अनि तपाँईको नि ?”
“मेघा, तपाँईको ?”
“म अभय ।”
स्कुटर कुपण्डोल गएर रोकियो ।
“अब घरबाट अफिस आउँदा गाडी नकुर्नुस्, सँगै आउँला ।” मेघाले मुस्कानसहितको अफर गरि ।
अभयले तत्कालै स्विकृति जनायो – “हुन्छ नि, धन्यवाद त्यसको लागि !”
अभय मेघाको स्कुटरमा अफिस जान थालेको पनि धेरै समय बितिसकेको थियो । यो अन्तरालमा उनीहरुबिच राम्रै चिनाजानी भैसकेको थियो । राम्रै दोस्ती पनि गाँसीयो । कहिलेकाँही बिदाको दिनमा समेत उनीहरु सँगै बजार निस्कन्थे ।
तर करिब ५ महिना पछि अजय फेरी चोकमा गाडी कुरेरै बस्न थालेको छ । मेघाले पनि चोकमा स्कुटर रोकेर बस्न छाडेकी छे । कारण स्कुटरवाली मेघाको पनि बिहे भयो ।
आकाशको तारा टिप्न खोज्छौ त कहाँ हुन्छ
फाटेको धर्ती लिप्न खोज्छौ त कहाँ हुन्छ
म भन्दै थिएँ नि ठुला सपना नदेख भनेर
छाती चिरेर मुटु झिक्न खोज्छौ त कहाँ हुन्छ ।